Tag: gam akporo | Martech Zone
Tag: gam akporo
Linq: Onye na - enye gi ezigbo nkwukọrịta okwu (NFC) Ngwaahịa Kaadị Azụmaahịa
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agụ saịtị m ogologo oge, ị maara oke obi m na-enweta ụdị kaadị azụmahịa dị iche iche. Enweela m kaadị mpempe akwụkwọ, kaadị square, kaadị ọla, kaadị laminated… M na-anụ ụtọ ha nke ukwuu. N'ezie, site na mkpọchi na enweghị ike njem, enweghi nnukwu mkpa maka kaadị azụmaahịa. Ugbu a, njem na-emepe, agbanyeghị, m kpebiri na ọ bụ oge imelite kaadị m wee nweta
Oge agafeela mgbe ịmịpụta ọdịnaya buru ibu zuru ezu. Ndị otu nchịkọta akụkọ ga-eche maka etu esi ekesa ha nke ọma, na itinye aka na ndị na-ege ntị na-eme ka akụkọ ahụ. Kedụ ka ngwa ngwa mgbasa ozi ga - esi (ma jigide) ndị ọrụ ya? Kedu ka usoro metrik gị si jiri tụnyere ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ? Pushwoosh enyochaala mgbasa ozi mgbasa ozi nke 104 na-arụ ọrụ akụkọ akụkọ dị njikere ma dị njikere inye gị azịza. Kedu ihe bụ ngwa ngwa mgbasa ozi kachasị? Site na ihe anyị hụrụ na Pushwoosh,
Ọ bụrụ n’ịga n’okporo ụzọ ede na ibipụta akwụkwọ ebook, ị maara ịma ụdị faịlụ EPUB, ntụgharị, nhazi na nkesa abụghị maka obi obi. Enwere ọtụtụ ọnụọgụ ebook na ebe ahụ nke ga - enyere gị aka site na usoro ahụ wee nweta akwụkwọ ntanetị gị na Akwụkwọ Google Play, Kindle na ngwaọrụ ndị ọzọ. Akwụkwọ ọgụgụ bụ ụzọ dị egwu maka ụlọ ọrụ iji tinye ikike ha na ohere ha na a
Dika ndi okacha amara na ndi okacha amara na acho ikwalite na inweta ego ha nwere n’ime, uzo di ole na ole bu imeghe uzo n’elu onyogho onyonyo n’elu (OTT) ma obu n’ezie itinye ego ma wuo usoro ihe omume, atumatu ihe omumu, na vidio dabere na ndebanye aha. . Ngwa oru na akụrụngwa dị mkpa maka ịmalite ngwa ngwa telivishọn, ijikọ ndenye aha, ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, na vidio vidio abụghị ihe dị mfe maka ụlọ ọrụ. O doro anya na, ozugbo ị malitere ngwa ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ